SM အင်တာတိန်းမန့်၏ စာချုပ်ကို လေးစားရန် EXO အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Tao ကို တရားရုံးချုပ် အမိန့်ချမှတ် - Yangon Media Group
ဆိုးလ်၊ မတ် ၂ဝ
တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးချုပ်က နာမည် ကျော်ကိုရီးယား အမျိုးသားအဆိုတော်အဖွဲ့ EXO မှ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Tao က S.M. အင်တာတိန်းမန့်နှင့်ချုပ်ဆိုထားသော အလုံးစုံစာချုပ် ကိုဖယ်ရှားပေးရန်တောင်းဆိုထားသော အမှု ကိုပလပ်လိုက်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက မတ် ၂ဝ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီက ”တရားရုံးချုပ်က မတ် ၁၅ ရက်မှာ အလုံးစုံ စာချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Tao ရဲ့ အယူခံကို ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ S.M. နဲ့ Tao ကြားက အလုံးစုံ စာချုပ်ဟာ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်လိုက်နာ ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဟွမ်ကျိ ထောင်ဟုအမည်ရသည့် Tao သည် အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ပြီးနောက် အခြားတရုတ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ခရစ်နှင့်လူဟန်တို့နှင့် အတည် ပြုချက်မရှိဘဲ ၂ဝ၁၅ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ၁ဝ နှစ်ကြာမြင့်သည့် စာချုပ်တွင် တရားမျှတမှုမရှိသော စည်းကမ်းချက်များပါ ရှိပြီး အခြားအလုပ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ အလုပ် တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်များကို ထိန်းချုပ်ကာလများများပြားကြောင်း ပြော ကြားထားသည်။
Tao သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဧပြီလနှင့် အောက်တိုဘာလတို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမဆုံးနှင့် အယူခံတရားခွင်တို့တွင်လည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ဆိုးလ်တရားရုံးချုပ်က သဘော တူစာချုပ်သည် Tao ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် SM သည်လည်း စာချုပ်ကိုကမ်းလှမ်းချိန်တွင် တရားဝင် စံသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာခဲ့ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။ SM က တရားရုံးချုပ်၏ စီရင ချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီး စောင့်ကြည်နိုင်သောစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုဖော် ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံး ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေ ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရုံထဲက ပြန?
အမေရိကန်က ပါလက်စတိုင်းကို နိုင်ငံစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်၍ ပါလက်စတိုင်းက ရှုတ်ချ